डाक्टरको ओपिडी शुल्क किन बढाउनु पर्‍यो? डा लोचन कार्कीसँग भिडियो वार्ता :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डाक्टरको ओपिडी शुल्क किन बढाउनु पर्‍यो? डा लोचन कार्कीसँग भिडियो वार्ता
स्वास्थ्यखबर आईतबार, फागुन ९, २०७७, १३:३१:००
काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्युसन नेपाल (अफिन)को आज बसेको बैठकले डाक्टरहरुको परामर्श शुल्क बढाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा शुल्क बढाइएको भन्दै त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरे पनि चिकित्सकहरुले भने शुल्क बढाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सक मात्र नभई आयुर्वेद चिकित्सकले समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणपछि पनि शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन्।
ओपिडीमा चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ३७० देखि ८२५ सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ।
चिकित्सकले बढाएको शुल्कको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोधका स्वरहरु आउन थालेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर स्वास्थ्यखबरले चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीसँग भिडियो वार्ता गरेको छ। डा कार्कीलाई कोरोना कहरको यो समयमा शुल्क बढाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? के यो न्यायोचित छ? लगायतका विषयमा कुराकानी गरिएको छ।
स्वास्थ्यखबरका लागि डिबी खड्काले डा कार्कीसँग गरेको भिडियो कुराकानी हेरौं :
नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता एमआरए मान्यता पाउनु भनेको कस्तो हो? नेपालले एमआरए मान्यता प्राप्त देशको सूचीमा कसरी पर्‍यो? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मेडिकल ल्याबलाई दिने मान्यता र यो एमआरए मान्यताबीच के फरक छ? १४ घण्टा पहिले